1 Makoronike 19:1-19
19 Zvino pashure paizvozvo Nahashi+ mambo wevanakomana vaAmoni akafa, mwanakomana wake akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 2 Dhavhidhi akabva ati: “Ndichaitira Hanuni mwanakomana waNahashi mutsa worudo,+ nokuti baba vake vakandiitira mutsa worudo.”+ Naizvozvo Dhavhidhi akatuma nhume kuti dzinomunyaradza pamusoro pababa vake, vashandi vaDhavhidhi vakasvika munyika yevanakomana vaAmoni+ maiva naHanuni kuti vamunyaradze. 3 Asi machinda evanakomana vaAmoni akati kuna Hanuni: “Munofunga kuti Dhavhidhi ari kukudza baba venyu zvaakutumirai vanyaradzi here? Vashandi vake havana kuuya kwamuri kuti vazonyatsoongorora nokusora+ nyika kuti vaiparadze here?”+ 4 Naizvozvo Hanuni akatora vashandi vaDhavhidhi+ akavaveura,+ akacheka nguo dzavo nepakati kusvikira pamagaro avo,+ akavadzinga.+ 5 Gare gare vanhu vakaenda, vakaudza Dhavhidhi nezvevarume vacho; uye akabva angotumira vanhu kunovachingura, nokuti varume vacho vakanga vava kunyara kwazvo; uye mambo akati: “Garai muJeriko+ kusvikira ndebvu dzenyu dzakura kwazvo, mozodzoka henyu.” 6 Kwapera nguva yakati, vanakomana vaAmoni vakaona kuti vakanga vava kuvengwa kwazvo+ naDhavhidhi, Hanuni+ nevanakomana vaAmoni vakatumira matarenda+ esirivha chiuru kuti vabhadhare ngoro+ nevatasvi vemabhiza kuMesopotamiya nokuAramu-maaka+ nokuZobha.+ 7 Naizvozvo vakabhadhara ngoro zviuru makumi matatu nezviviri+ namambo weMaaka nevanhu vake.+ Vakabva vauya, vakadzika misasa pakatarisana neMedhebha;+ asi vanakomana vaAmoni vakaungana vachibva mumaguta avo, vakauya kuzorwa. 8 Dhavhidhi paakanzwa nezvazvo, akabva atuma Joabhi+ neuto rose nevarume vaiva nesimba.+ 9 Vanakomana vaAmoni vakabuda, vakagadzirira kurwa pasuo reguta, uye madzimambo+ akanga auya aiva oga musango. 10 Joabhi paakaona kuti mauto akanga ava kurwisana naye mberi neshure, akabva angosarudza vamwe pavarume vose vakanga vakasarudzwa pakati paIsraeri, akaita kuti vagadzirire kusangana nevaSiriya.+ 11 Akaita kuti Abhishai+ mwana wababa vake atarisire vamwe vanhu vose, kuti vagadzirire kusangana nevanakomana vaAmoni.+ 12 Iye akati: “Kana vaSiriya+ vakandikunda, iwe undiponesewo;+ asi kana vanakomana vaAmoni vakakukunda, ndichakuponesawo.+ 13 Simba,+ kuti tiratidze kuti takashinga nokuda kwevanhu vedu uye nokuda kwemaguta aMwari wedu;+ uye Jehovha achaita zvakamunakira.”+ 14 Joabhi nevanhu vaaiva navo vakabva vaswedera pedyo nevaSiriya kuti varwe,+ ivo vakamutiza.+ 15 Vanakomana vaAmoni vakaona kuti vaSiriya vakanga vatiza, ivo vakatizawo+ Abhishai mwanakomana wababa vake, vakabva vapinda muguta.+ Gare gare Joabhi akasvika muJerusarema. 16 VaSiriya pavakaona kuti vakanga vakundwa+ nevaIsraeri, vakatuma nhume, dzikauya nevaSiriya vaiva munzvimbo yoRwizi,+ vachitungamirirwa naShofaki mukuru weuto raHadhadhezeri. 17 Dhavhidhi paakazviudzwa, akabva aunganidza vaIsraeri vose, akayambuka Jodhani, akasvika kwavaiva, akagadzirira kurwa navo.+ Dhavhidhi paakagadzirira kuti asangane nevaSiriya, vakatanga kurwisana naye. 18 Asi vaSiriya vakatiza+ vaIsraeri; uye Dhavhidhi akauraya vatyairi vengoro zviuru zvinomwe nevarume vaifamba netsoka zviuru makumi mana pavaSiriya, uye akauraya Shofaki mukuru weuto racho.+ 19 Vashandi vaHadhadhezeri pavakaona kuti vakanga vakundwa nevaIsraeri,+ vakakurumidza kutsvaka rugare naDhavhidhi, vakatanga kumushandira;+ uye Siriya haina kuzoda kuedzazve kuponesa vanakomana vaAmoni.+